Ahoana ny fomba malama ny hoditra amin'ny Photoshop | Famoronana an-tserasera
Rehefa mahita sary na sary tonga lafatra ao amin'ny magazine isika, maodely misy hoditra malama sy malama ary misy famirapiratana mifehy tsara, dia matetika ireo sary ireo no mitondra fitsaboana. Ny fery amin'ny hoditra, ny ketrona, ny ratra, ny mony ... dia zavatra mampatahotra antsika indraindray. Adobe Photoshop dia manolotra fitaovana sasany hahafahantsika mampihena na manafoana ireo marika ireo. Amin'ity lesona ity dia holazaiko aminao Ahoana ny fanamainana ny hoditra amin'ny Photoshop nefa tsy tafiditra amin'ny valiny artifisialy loatra. Liana ve ianao? Vakio hatrany ny lahatsoratra!
1 Sokafy ny sary ary tadiavo ireo fitaovana fanitsiana ao amin'ny Photoshop
1.1 Borosy fanitsiana teboka
1.2 Borosy fanasitranana
1.3 Fomba hafa
2 Alefaso kokoa ny hoditra amin'ny Photoshop
2.1 Ataovy avoaka ny sosona ary asio vovoka sy hodi-kazo
2.2 Ampiharo ny Gaussian Blur
3 Avereno ny antsipiriany very
Sokafy ny sary ary tadiavo ireo fitaovana fanitsiana ao amin'ny Photoshop
Andao atomboka amin'ny fanokafana ny sary. Roa no nofidiko, ny iray amin'izy ireo dia saika tsy misy retouching mba ho hitantsika tsara ny fizotrany. Voalohany indrindra ho hitantsika ireo fitaovana roa atolotry ny Photoshop hanitsy na mamafa tsiny:
Ny fitaovana Borosy fanitsiana teboka
Ny fitaovana borosy miafina
Samy manana azy ireo ao amin'ny baraovana. Hampiasa azy ireo isika diovy ny tsy fahalavorariana hita maso indrindra amin'ny sary.
Borosy fanitsiana teboka
La Fitaovana borosy fanasitranana Spot mandeha ho azy santionany amin'ny sary ary izay ataony dia rehefa tsindrio ny "tsy fahalavorariana" na amin'ny faritra tiana ahitsy, manolo pikantsary sasany amin'ny hafa izay azo tamin'io santionany io.
Ao amin'ny menio fitaovana dia afaka manova ny toetrany isika, afaka manova ny habe sy ny volon'ny borosy, fa koa ny karazana santionany, Afaka mangataka anao izahay mba hameno araka ny atiny na hanitsy ny faritra ampiharantsika azy amin'ny tontolo iainana.
Amin'ny sary toa an'ity iray ity, izay misy endriny manokana, ny safidy "manitsy ny tontolo iainana" dia mirary miasa tsara kokoa, amin'ny ankapobeny satria manaja azy io bebe kokoa ary madio kokoa ilay retoucha izay nesorinay ny maratra eto.
Na dia ny fitaovana fanasitranana Spot Brush aza no mora ampiasaina indrindra ary haingana indrindra satria mandeha ho azy dia tsy manome valiny tsara indrindra foana izany. Ohatra, amin'ny tranga misy ny chicho dia misy granite kely izay manakaiky ny volo. Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny borosim-borona miafina, dia haingoinao ny volo sasany ary tsy dia tsara ny vokany. Soa ihany, manana fitaovana ao amin'ny Photoshop izahay azontsika atao ny milaza amin'ny solosaina ny zavatra tiantsika hiorina amin'ny santionany: ny borosy fanitsiana.
Fanindriana ny bokotra safidy (raha miaraka amin'ny Mac ianao) na alt (raha miaraka amin'ny Windows ianao) azonao atao ny manondro ny toerana itiavanao ny santionany amin'ny tsindry iray. Manoro hevitra anao aho mba hametraka ny santionanao amin'ny faritra iray amin'ny hoditra izay tsy dia misy lesoka be dia be, avy eo ny Photoshop dia hanitsy ny famirapiratana, ny tonony ... Rehefa misafidy ny faritra ianao dia manafaka alt ya mila mandoko fotsiny ireo tsy fahalavorariana isika izay irinay hanjavona. Ity fitaovana ity dia miasa tsara, na dia apetrakao amin'ny sehatra midadasika aza, toa eto, amin'ity sary fahatelo nampiasako ity mba hanafoanana io faritra freckles io.
Fomba iray tsy manam-petra kokoa hanaovana izany ny mifantina ny faritra amin'ny fitaovana fifantenana haingana, ary ao amin'ny kiheba fanontana dia tsindrio hofenoina> araka ny atiny. Izy io dia afaka manome valiny tsara, na dia lehibe dia lehibe aza ny velarantany ... Tsy hatoky tena be loatra aho io fomba io
Alefaso kokoa ny hoditra amin'ny Photoshop
Raha vantany vao nahitsintsika ireo tsy fahalavorariana hita maso indrindra, andao hojerentsika ny fomba fanalefaka kokoa ny hoditra ao amin'ny Photoshop. Ho an'ity, ny hataontsika dia asio sivana samihafa ary ampifanaraho ho an'ny vokatra voajanahary azo atao.
Ataovy avoaka ny sosona ary asio vovoka sy hodi-kazo
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia dika mitovy sary, mba hamerenana ireo sosona dia efa fantatrao fa azonao atao izany amin'ny alàlan'ny fanindriana sy ny fanomezana sosona duplicate, na amin'ny menio lehibe, sosona> sosona duplicate. Ary raha manokatra azy ianao dia azonao atao ihany koa ny mandika sy mametaka amin'ny alàlan'ny hitsin-dàlana hitsin-dàlana + c, dia alefaso ny + v.
Raha vantany vao naverinay ny sosona, dia hametraka sivana iray amin'izany isika. Handeha amin'ny menio lehibe isika ary hisafidy sivana, tabataba, vovoka ary rakotra. Ny masontsivana izay omentsika eto dia miankina amin'ny haben'ny sary, omenao maso aloha ary hizaha toetra ianao, avelako izy amin'ny 4 sy 0. Tadidio fa raha mandalo ny valiny ianao dia tena artifisialy izany ary tsy izay tadiavintsika.
Amin'ny fampiharana an'ity sivana ity dia hisy ny antsipiriany momba ny sary very, aza manahy izany intsony izao satria hovahantsika izany avy eo.
Ampiharo ny Gaussian Blur
Amin'ity sosona ity ihany, hametraka sivana faharoa isika, andao handeha hanivana> gaussian blur. Indraindray ireo sanda eto dia manondro, omeko radius 2 izy, saingy manandrana mijanona amin'ireo soatoavina mandresy lahatra anao indrindra ianao. Tsy maintsy ataontsika izay hananan'ny hoditra izany vokatra malefaka izany.
Tsy maintsy atao ity dingana farany ity. Tsy tiako ny mamerina azy ireo mba tsy ho artifisialy loatra, miloko ny hoditra ary very izany firafitra izany rehefa mametraka ny sivana, izany no mahatonga ahy amin'ny farany Tiako ny manisy tabataba kely ao, Hapetrako ao ny 0,7.
Avereno ny antsipiriany very
Efa nolazaiko teo ihany fa rehefa mampihatra ireo sivana isika mba hanalefaka ny hoditra ao amin'ny Photoshop dia misy pitsopitsony very. Ohatra, amin'ny endrik'ilay zazalahy, amin'ny faritra misy volombava sy volo Ahoana no ahafahantsika mamerina ireo andinindininy ireo? Ny tena ilaintsika tokoa dia ny hoditra ihany no asiana ny sivana fa tsy amin'ny sosona iray manontolo sy izay ho vitantsika izany amin'ny famoronana sarontava saron-tava.
Mba hamoronana sarontava sosona dia mila fotsiny isika: safidio ny sosona ary kitiho ny marika hita fa voahodidin'ny sary. Araka ny hitanao, ny sarontava dia hiseho fotsy voalohany, izay midika fa misy izay rehetra eo amin'ny sosona. Fipihana eo amin'ny solosaintsika baiko + izaho, andao havadika io ho an'ny sarontava hanilihana ny zava-drehetra, rehefa manindry ny hitsin-dàlana fitendry ny sarontava ho miloko mainty.
Amin'ny borosy sy ny fisafidianana ny loko fotsy, dia hanao sary izay tianay hampidirina izahay, izany hoe ireo faritra tianay hampiharina ireo sivana ireo, raha manao fahadisoana ianao dia aza manahy fa amin'ny borosy mainty no azonao esorina amin'ny safidinao. Raha mijery akaiky ianao, dia ho hitanao fa afaka mamerina izany pitsopitsony izany ianao, na dia ny tena zava-misy aza dia mamela ny fisehoan'ny ambadika (ilay misy ny kinova am-boalohany ny sary) izay tena mitahiry azy ireo.
Ity no vokatra farany, ahoana ny hevitrao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Tutorials » Ahoana ny fomba malama ny hoditra amin'ny Photoshop